ရျောနယျဒိုက မနျစီးတီးဆီ ဘယျတုနျးကမှ မသှားခငျြခဲ့ဘူး . . . |
နှရောသီဈေးကှကျအတှငျး ရျောနယျဒိုဟာ မနျစီးတီးကို ပွောငျးရှဖေို့ ဘယျတုနျးကမှမဖွဈခဲ့ဘူးလို့ နညျးပွဆိုးလျရှားက ပွောဆိုလိုကျပါတယျ။
ကစားသမားရဲ့အေးဂငျြ့ဂြော့မနျဒကျဈက အသငျးအနညျးငယျနဲ့ ခြိတျဆကျစကားပွောဆိုမှုတှရှေိခဲ့ရာမှာ ယူနိုကျတကျရဲ့ မွို့ခံပွိုငျဘကျမနျစီးတီးလညျး ပါဝငျခဲ့တယျလို့ သတငျးတှထှေကျခဲ့ကာ အီတီဟတျကိုပွောငျးရှဖေို့ ရပေနျးစားခဲ့ပမေယျ့ အဆုံးမှာ ယူနိုကျတကျကို ပွနျပွောငျးရှခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။
မနျစီးတီးနဲ့ ရျောနယျဒိုတို့ ခြိတျဆကျနတေယျလို့ သတငျးတှထှေကျခဲ့ခြိနျမှာ ယူနိုကျတကျပရိသတျတှအေားလုံး အံ့အားသငျ့ဒေါသထှကျ ခဲ့ရပါသေးတယျ။
ရျောနယျဒိုက ဒီနမှေ့ာဆိုရငျ သူ့ရဲ့ပှဲဦးထှကျအဖွဈ နယူးကာဆယျနဲ့ပှဲကို ပါဝငျကစားဖို့ အသငျ့ရှိနပွေီဖွဈပါတယျ။
တကယျလို့ ရျောနယျဒိုသာ ယူနိုကျတကျအသငျးဆီ မရောကျလာခဲ့ဘဲ မနျစီးတီးအသငျးကို ရှေးခယျြသှားခဲ့မယျဆိုရငျ မနျစီးတီးရဲ့ကစားသမားအငျအားက ကွောကျစရာကောငျးလာနိုငျတယျလို့
ထငျမွငျမိသလားလို့ ဆိုးလျရှားကို မေးမွနျးခဲ့ရာ ဆိုးလျရှားက “ဒီလောကျထိ ဖွဈလာနိုငျလိမျ့မယျလို့တော့ ကြှနျတျော မထငျမိပါဘူး။
ရျောနယျဒိုကိုယျတိုငျလညျး အဲဒီနရောကို သှားခငျြမှာ မဟုတျဘူးလို့လညျး ကြှနျတျော ထငျပါတယျ” လို့ ပွနျလညျဖွဆေိုသှားခဲ့ပါတယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ လကျရှိခနျြပီယံ မနျစီးတီးအသငျးဟာ အသငျးရဲ့ ဝါရငျ့ကစားသမားကွီး ဆာဂြီယိုအဂှဲရိုးကို လကျလှတျထားရပွီးနောကျမှာ အသငျးရဲ့ တိုကျစဈပိုငျးအတှကျ စပါးတိုကျစဈမှူး ဟာရီကိနျးကို ချေါယူသှားဖို့ ကွိုးပမျးခဲ့ပမေယျ့
မအောငျမွငျခဲ့သလို ရျောနယျဒိုကို ချေါယူဖို့ လုပျဆောငျခဲ့ရာမှာလညျး မွို့ခံအသငျးရဲ့ နောကျကောကျခမြှုနဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့ရပါသေးတယျ။
ရျောနယျဒိုနဲ့ မနျစီးတီး သတငျးတှထှေကျခြိနျ ဆိုးလျရှားနဲ့ ဖာဂူဆနျကအဲ ဒီအပွောငျးအရှမှေ့ာ ပါဝငျလာခဲ့ပွီးနောကျ ရျောနယျဒိုက အိုးထရကျဖို့ဒျကို ပွနျရောကျလာခဲ့ပါတယျ။
တိုတောငျးတဲ့နာရီအနညျးငယျအတှငျး အပွောငျးအရှဖွေ့ဈခဲ့ပွီး သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ရော်နယ်ဒိုက မန်စီးတီးဆီ ဘယ်တုန်းကမှ မသွားချင်ခဲ့ဘူး . . .
နွေရာသီဈေးကွက်အတွင်း ရော်နယ်ဒိုဟာ မန်စီးတီးကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဘယ်တုန်းကမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ နည်းပြဆိုးလ်ရှားက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ကစားသမားရဲ့အေးဂျင့်ဂျော့မန်ဒက်စ်က အသင်းအနည်းငယ်နဲ့ ချိတ်ဆက်စကားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ရာမှာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ မြို့ခံပြိုင်ဘက်မန်စီးတီးလည်း ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ခဲ့ကာ အီတီဟတ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ ရေပန်းစားခဲ့ပေမယ့် အဆုံးမှာ ယူနိုက်တက်ကို ပြန်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မန်စီးတီးနဲ့ ရော်နယ်ဒိုတို့ ချိတ်ဆက်နေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ခဲ့ချိန်မှာ ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေအားလုံး အံ့အားသင့်ဒေါသထွက် ခဲ့ရပါသေးတယ်။ ရော်နယ်ဒိုက ဒီနေ့မှာဆိုရင် သူ့ရဲ့ပွဲဦးထွက်အဖြစ် နယူးကာဆယ်နဲ့ပွဲကို ပါဝင်ကစားဖို့ အသင့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ရော်နယ်ဒိုသာ ယူနိုက်တက်အသင်းဆီ မရောက်လာခဲ့ဘဲ မန်စီးတီးအသင်းကို ရွေးချယ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် မန်စီးတီးရဲ့ကစားသမားအင်အားက ကြောက်စရာကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ ထင်မြင်မိသလားလို့ ဆိုးလ်ရှားကို မေးမြန်းခဲ့ရာ ဆိုးလ်ရှားက “ဒီလောက်ထိ ဖြစ်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ ကျွန်တော် မထင်မိပါဘူး။ ရော်နယ်ဒိုကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီနေရာကို သွားချင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်” လို့ ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ လက်ရှိချန်ပီယံ မန်စီးတီးအသင်းဟာ အသင်းရဲ့ ဝါရင့်ကစားသမားကြီး ဆာဂျီယိုအဂွဲရိုးကို လက်လွတ်ထားရပြီးနောက်မှာ အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက် စပါးတိုက်စစ်မှူး ဟာရီကိန်းကို ခေါ်ယူသွားဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့သလို ရော်နယ်ဒိုကို ခေါ်ယူဖို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာမှာလည်း မြို့ခံအသင်းရဲ့ နောက်ကောက်ချမှုနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါသေးတယ်။
ရော်နယ်ဒိုနဲ့ မန်စီးတီး သတင်းတွေထွက်ချိန် ဆိုးလ်ရှားနဲ့ ဖာဂူဆန်ကအဲ ဒီအပြောင်းအရွှေ့မှာ ပါဝင်လာခဲ့ပြီးနောက် ရော်နယ်ဒိုက အိုးထရက်ဖို့ဒ်ကို ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ တိုတောင်းတဲ့နာရီအနည်းငယ်အတွင်း အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်ခဲ့ပြီး သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တဈခြိနျက ပွိုငျဘကျဟောငျးဖွဈခဲ့တဲ့ မျောရငျဟိုကို ခြီးကြူးစကားဆိုလိုကျတဲ့ ဖာဂူဆနျ